Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ezempilo Canada Isilumkiso: Abacoci bezandla abanampilo kangako
I-Health Canada icebisa abantu baseCanada ukuba ezi sanitizers zilandelayo ziyakhunjulwa ngenxa yokuba zinokubeka umngcipheko empilweni.
I-Health Canada igcina olu luhlu lwee-sanitizers zezandla ezinokubeka umngcipheko wezempilo, ukuze abantu baseKhanada bachonge ngokulula iimveliso abanokuthi bazithengile kwaye bathathe amanyathelo afanelekileyo. Abantu baseCanada bayakhuthazwa ukuba bayijonge rhoqo ukuze ihlaziywe.
imveliso Umngcipheko weMpilo inkampani NPN okanye
DIN Inombolo yeLot Umhla WOKUPHELELWA Inyathelo elithathiweyo
nguCN Pharma; ShieldPlex Imveliso hayi
Iqela Inc. 80098091 dc2005np001 db042120 dc2005np002 db42120 Epreli 2023 Epreli 2023 Epreli 2023 Epreli 2023 Imveliso ikhunjulwe
amanqanaba aphezulu Imimoya Yamatye 80098012 20121 20122 20128 20156 20160 Epreli 2022 Meyi 2022 Meyi 2022 Juni 2022 Juni 2022 Imveliso ikhunjulwe